Na ntukwasi-obi ehichapụkwa gị Android mbadamba tupu ere ya
Ị pụrụ iche na ụlọ ọrụ mmepụta ihe resetting gị Android mbadamba ga-ehichapụkwa na ihichapu niile gị onwe onye data ma ọ bụghị otú ahụ. The data kpochapụrụ na ehichapu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe fọdụrụ nwere ike weghachiri eweghachi na-enweta iji ụfọdụ software. N'ezie na ihichapu gị Android mbadamba, i kwesịrị iji ụfọdụ software nke ga-hụ na ọ dịghị metụtara nke data na-ekpe ma ọ bụ recoverable dị ka Wondershare MobileTrans. Ị na-dụrụ mbụ aka ihichapu mbadamba na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta nhọrọ n'ihu na-eji ndị Wondershare MobileTrans. Ị kwesịrị ị na-emekwa ka n'aka na ị nwere ndabere gị niile data dị n'ihu ụlọ ọrụ mmepụta ihe resetting ma ọ bụ n'ihu na-eji Wondershare MobileTrans. Niile data ehichapu site Wondershare MobileTrans na-arahụ ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi ya, i kwesịrị ịkpachara anya.
Encrypting gị Android mbadamba-echekwa gị mbadamba si data na unreadable na scrambled ụdị. Nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na gị mbadamba e dere mwute data. Mgbe ị na-ike na gị mbadamba, ị ga-abanye na izo ya ezo paswọọdụ nke bụ otu ihe dị ka gị mbadamba si mkpọchi ihuenyo paswọọdụ.
Encrypt gị gam akporo ngwaọrụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Site gị Android menu, na-emeghe ntọala ngwa na gbadaa na nche. Enweta Nche na-emeghe nche ntọala.
Ọ dị mkpa na gị mbadamba na-n'ụzọ zuru ezu ebubo ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ 80% ebubo n'ihu encrypting ngwaọrụ gị. Ọ bụ ezie na, ihe kasị mma ime bụ encrypt mbadamba na-achajị ya. Nke a bụ n'ihi na usoro-ewe oge na ọ pụrụ ịbụ a nsogbu ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gara na-enweghị emecha usoro. Ọzọkwa, oge ọ na-ewe iji encrypt gị mbadamba na-adabere na size nke data echekwara na mbadamba. The ibu data, ihe oge ọ ga-ewe.
Ịrụ factory nrụpụta
Factory nrụpụta bụkwa ụzọ ọzọ nke ekpocha gị niile mbadamba data n'agbanyeghị na ọ Ahụghị doro anya ihe niile. Ọ dị mkpa ime ya n'ihu na-eji software ka kpamkpam ehichapụkwa gị mbadamba. Iji Factory Tọgharia gị Android mbadamba, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Site Home ihuenyo, pịa NchNhr button na-aga Ntọala.
Nzọụkwụ 2: pịgharịa gaa na ala ma họrọ "ndabere & tọgharịa".
Nzọụkwụ 3: Ugbu a pịgharịa ala ọzọ na enweta "Factory data nrụpụta".
Nzọụkwụ 4: Nyochaa ihe ọmụma na ihuenyo na pịa Tọgharia mbadamba.
Usoro nwere ike iri a ole na ole oge, ma mbadamba ga-reboot na-arịọ gị maka paswọọdụ gị ma ọ ntụtụ. Dị nnọọ ọsọ ọsọ paswọọdụ ma ọ bụ pin eji mgbe encrypting mbadamba.
Na-adịgide adịgide ihichapu data na Wondershare MobileTrans
Ụzọ kasị mma ihichapu gị Android mbadamba bụ na Wondershare SafeEraser. Wondershare SafeEraser bụ ezigbo Android & iOS ngwaọrụ "ihichapu" ngwa e mere iji na-adịgide adịgide ehichapụkwa onwe onye nile ọmụma si ngwaọrụ iji US Military spec n'elu-ede technology ijere data unrecoverable ; alọta na ngwaọrụ a "dị ọcha wepụrụ ebubo" ala n'ihu gị resell, inye ma ọ bụ ahia ya.
Iji hichapụ gị mbadamba na ihichapu niile Data ọrụ na-eso nzọụkwụ dị ka e n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Open Wondershare SafeEraser na jikọọ na Android mbadamba na kọmputa na ihe eriri USB. Biko mee n'aka na i nwere nwee USB Debugging mode na gị mbadamba tupu ejikọta. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosipụta dị ka n'okpuru.
Nzọụkwụ 2: Pịa na ihichapu niile Data na usoro. Ibà "Hichapụ" n'ịkwado iji na pịa ihichapu Ugbu a ime na.
Nzọụkwụ 3: The omume ga-a nkeji ole na ole ihichapu niile data na android mbadamba, gụnyere music, videos, photos, kọntaktị, ngwa ọdịnala, wdg Ọ na-adabere data nchekwa na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 4: wee soro ntuziaka na omume na-enweta na Factory Data Tọgharia ma ọ bụ Ihichapu ọdịnaya niile na mbadamba na-ehichapụ niile usoro ntọala.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a, dị nnọọ-na na na zuru ike mgbe Wondershare SafeEraser eme dum ọrụ n'ihi na ị na ya. Ozugbo usoro nke ihicha ihe ma ọ bụ nhicha gị Android mbadamba ngwaọrụ bụ zuru ezu, ngwa ga-egosi a ozi egosi na na ihuenyo.
Rịba ama: Cheta na Wondershare SafeEraser bụ nnọọ ngwá ọrụ dị ike na data ehichapu na ọ na-apụghị natara n'agbanyeghị ihe. Ya mere, unu ga-ukwuu nke na-elekọta mgbe erasing data na Wondershare SafeEraser na-eji naanị ya ma ọ dị mkpa.
> Resource> Ihichapu> na ntukwasi-obi Hichapụ Your Android Tablet tupu ere ya